Daawo Sawirada: Booliiska Mareykanka oo Baahiyay Muuqaalka Nin Madow ah ay dilayaan | Gaaroodi News
Daawo Sawirada: Booliiska Mareykanka oo Baahiyay Muuqaalka Nin Madow ah ay dilayaan
Gaaroodinews.net Booliiska magaalada Charlotte ee dalka Maraykanka ayaa markii ugu horeesay waxa ay baahiyeen Muuqaalka nin Madow ah ay toogteen arbacadii lasoo dhaafay, waxaana toogashadan ka dhalatay rabshado xoogan.
Muuqaalkan la baahiyay waxaa duubay Kaamirooyin ku xirnaa gaariga booliiska uu watay askariga toogtay ninka madowga ah toogtay , waxaana baahinta muuqaalkan ay timid kadib markii laga dalbaday booliiska in ay soo bandhigeen muuqaalka sida ay wax u dhaceen.
Booliisa ayaa sidoo kale soo bandhigay Sawirada Biskoolad iyo daroogada marijuana-ha uu watay ninka la toogtay oo lagu magacaabayay Keith Lamont Scott, waxa ayna booliiska ku andacoodeen in uu ninkan hubeesnaa uuna doonayay in uu dhibaato geesto.
Muuqaalka ay baahiyeen booliiska ayaa muujinaya Scott oo kasii baxaya gaarigiisa una sii socda dhanka dambe isaga oo gacmihiisu hoos u laadlaadaan, mana cadda in uu bistoolad ku haystay gacmihiisa.
Booliiska Muuqaalka ay soo bandhigeyn ayaan laga arkeyn qaabta uu u dhacay dilka , waxaana la maqlay dhawaqa afar xabadood waxaana xiligaa kadib xigtay Keith Lamont Scott oo dhulka kusii dhacay halkaasna ku geeriyooday.
Dilkan booliiska Cadaanka ah u geesteen ninka Madowga ah waxaa ka dhashay banaan baxyo rabshado watay oo ruxay magaalada Charlotte , ciidamada amaanka ayaana magaaladaasi markii dambe kusoo rogay xaalad deg deg ah.